SketchAR Create Art & get NFT အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（83.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် SketchAR Create Art & get NFT
ထူးခြားတဲ့အပြန်အလှန် AR ဒီဂျစ်တယ်ပုံဆွဲ၏ချဉ်းကပ်မှု, ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်နှင့် gamification အားဖြင့်သင်တို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှုဖွံ့ဖြိုး။ ငါတို့သည်သင်တို့၏သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကိုဖွင့်မြန်နှုန်းအတူတကွ AR နဲ့ AI ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပိုမို entertaining လုပ်ပါပြီ။
SKETCHAR အမြဲတည်ဆောက်တစ်ခုခုလိုခဲ့ပေမယ့်ဘယ်တော့မှမနိုင်ခဲ့ဘူးသောသူတို့အဘို့ကြီးစွာသော NFT ဖန်တီးသူဖြစ်ပါတယ်။ !
1: ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူသင့်ရဲ့အနုပညာ Share
ဤတွင်သာ SKETCHAR app ကိုအပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သောထူးခြားသော features တွေဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းကင်မရာမှတဆင့်
ဆွဲဘို့တိုးပွား Reality, သင်များ၏ရှေ့မှောက်၌မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတစ် AR ပုံကြမ်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရုံခဲတံကိုယူပြီးစက္ကူ step-by-ခြေလှမ်းအပေါ်ကို virtual လိုင်းများလိုက်နာပါ။ ဒီအမဲနှိုက်ဓာတ်ပုံကို app ကို function ကိုလည်းနံရံများကဲ့သို့အမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ပုံကြမ်းစကေးမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာရှင်များကအလုပ်ခန့်သည်။
2 ။ AI အပုံ & NFT အေအာရ်တီဆေး MAKER ရုံတစျခုကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူဒီဂျစ်တယ်အနုပညာသရုပ်ဖော်ပုံများသို့သင်၏ဓါတ်ပုံများ Turn
။ အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ smartphone ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာရှင်တွေပြုကြသောတူညီသောအမှုတို့ကိုပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အနုပညာသင်ယူမှုလမ်းကြောင်းလွယ်ကူပြီးပျော်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆွဲဘို့ဇယားကွက်တစ်ခု AR ထုတ်လုပ်သူကိုသုံးပါနှင့် NFT သို့သင့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဖွင့်!
3 ။ mini-ဂိမ်းများအနုပညာစိန်ခေါ်မှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါ
! သင်တစ်ဦးတည်းလုပ်ရန်မလိုပါ - ကမ္ဘာတဝှမ်းအများအပြားအသုံးပြုသူများသည်လူကြီးများအတွက် apps များကိုဆွဲရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ကြောက်မက်ဘွယ် Mini-ဂိမ်းတစ်ခုအပြန်အလှန်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူသင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အခြားအသုံးဝင်သောကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်။ အတူတူဆွဲရန်လေ့လာပါနှင့်အသုံးပြုမှုအနုပညာရှယ်ယာကမ္ဘာကြီးကိုသင်၏အလုပ်ပြသရန်ပါရှိပါတယ်။
4 ။ သင်ခန်းစာများကို drawing နှင့်အတူဘာသာရပ်များခြေလှမ်း-by-step သင်ခန်းစာများအမျိုးမျိုးတို့တွင်အသင်အကြိုက်ဆုံး Choose
။ သငျသညျပုံတူသို့မဟုတ် anime ဖန်တီးခြင်းအတွက်ဥပမာ, သင့်ရဲ့အနုပညာကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းတိကျတဲ့ခေါင်းစဉ်သို့အစပြုအစုံသို့မဟုတ် delve နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်များ, ကာတွန်း, anime, ရေးခွနှင့်အခြားအေးမြပစ္စည်းပစ္စယအမြောက်အမြားကိုဆွဲရန်လေ့လာပါ။
5 ။ တစ်ဦးခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်နှင့်အတူ Tool များစည်း။
သင်တို့သည်ငါတို့၏အဓိကအင်္ဂါရပ်စမ်းဖို့စက္ကူစာရွက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်, ပုံဆွဲ tool ကို၏အကူအညီဖြင့်လေ့ကျင့်နိုင်ပါ။ ကြီးစွာသောအရာသင်ကသင်ဆွဲစုံလင်သောစေရန်ကူညီပေးသည်ဖြစ်သော (ကခဲတံ, အမှတ်အသား, ဒါမှမဟုတ်ဖြီး) လိုအပ်သည့်အခါ app ကိုတိုင်းအဆင့်မှာညာဘက် tool ကိုနှင့်အတူသငျသညျကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
6 ။ ခွဲဝေမှုအဘို့အ PLATFORM သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏အောင်မြင်မှု Share
။ သင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီ၏တစ်ဦးကအချိန်-ချုံးကဗီဒီယိုကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ app ကိုပရိုဖိုင်းထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ရေးဆွဲရေးပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အတူတူဆွဲဒီဇိုင်း!
7 ။ အားလုံးအေးမြလက်ရာများအတွက် NFT ။ အဆိုပါ NFT blockchain နည်းပညာကိုအသုံးချရန်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်သင့်ရဲ့အနုပညာရရှိနိုင်ပါစေ
အဒီ app ကွဲပြားခြားနားသောကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်အဘို့စုံလင်သည်။ သင်တစ်ဦးဒီဂျစ်တယ်အနုပညာလမ်းညွှန်အဖြစ်နည်းပညာသုံးပြီးခြေလှမ်းတို့က sketch ခြေလှမ်းသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူသောပုံကြမ်းတွေနဲ့ Start ကိုသင်လိုချင်သမျှကိုနှင့် NFT ကတ်များကဲ့သို့အအံ့သြဖွယ်လုပ်တစ်ခုခု, AI အပုံတူများနှင့်အခြားပျော်စရာအနုပညာဆွဲ
အမှန်အကန် detect အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောကျလိုကျအကြံပြုချက်များ။
- တစ်ဦးကောင်းစွာ-lit ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာပါ။ တိုင်း AR နည်းပညာတစ်ခုလုံလုံလောက်လောက်တောက်ပအခန်းထဲမှာလိုအပ်သည်။
- သငျဝိုငျးဝနျးအဖြစ်မဟုတ်ရင်, စက္ကူသင့်ရဲ့အပိုင်းအစရွှေ့မည်, etc, တစ်ဦးကို clipboard သုံးစွဲဖို့သတိရပါ။
- Do သင့်ရဲ့ smartphone ကိုလှုပ်မရ။
ခုနှစ်တွင်-app purchase: SketchAR ကမ်းလှမ်းမှုသင် app ကိုဖွင့်ပရီမီယံအကြောင်းအရာနှင့်အင်္ဂါရပ်များမှန့်အသတ် access ကိုပေးသုံး paid Auto-ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ subscription ကိုရှေးခယျြစရာ။ 1 လ Subscription
- $ 9.99 / လ 3-Day ကိုစမ်းသပ်နှင့်အတူ 1 နှစ် Subscription
- $ 34,99 / တစ်နှစ်တာ 1 နှစ်အထူးကမ်းလှမ်းချက် Subscription
စျေးနှုန်းများနိုင်ငံများတလွှားကွဲပြားစေခြင်းငှါ $ 49,99 / ။
စျေးနှုန်းများ Google ရဲ့ Play Store ကို Matrix အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက် subscription ကိုစျေးနှုန်း၏ညီမျှသောအဖြစ်ဆုံးဖြတ်သည်သောတန်ဖိုးညီမျှကြသည်။
ကျနော်တို့အမြဲသင့်ရဲ့အမြင်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်, ဒါကြောင့် [email protected] မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။